Sy ny fotoana nampanonofy antsika Olombelona arabo - Fidaoussi
Sy ny fotoana nampanonofy antsika Olombelona arabo — Fidaoussi
Ny olon-tiany eo amin’ny olona amin’ny ankapobeny no tena mahafinaritra ny fihetseham-po. Na izany aza, dia matetika no voalaza ao amin’ny tontolo arabo izay olona manao ny tsy koa. Na izany aza, izany no mitranga fa izany fihetsika izany mametraka ny vehivavy arabo ao amin’ny toe-javatra ny fahoriana, satria nilaza izy fa raha ny olona tia ny tena, dia nahoana no tsy mampiseho azy izy tsy misy intsony ny fitiavana. Koa izany no iray amin’ireo antony mahatonga be dia be ny mpivady arabo dia niditra tao amin’ny fifandanjan’ny izay mandrahona ny fahamarinan-toerana sy ny fianakaviana. Matetika, ny vehivavy tsy mahalala fomba smolder ny tao am-pony ny vadiny mba hahatonga azy ho lehilahy»bebe kokoa ny tantaram-pitiavana». Ohatra, mety ho fotsiny ianao, dia asehoy izany-na dia bebe kokoa ny tantaram-pitiavana ny olona, na hanao soa am-po ny zavatra tiany. Izany no tsy ratsy ny hevitr’io, tsy misy fandikan-dalàna sasany, satria vehivavy tsirairay dia manana ny feno tsara ho tia ny vadiny izy rehefa maniry. Ny arabo lehilahy dia tena saro-pady, na manafina izany dia hiseho ho matanjaka eo imason ny manodidina Dia tia be loatra ny mandre mampamangy amin’ny vadiny. Ankoatra izany, izy dia liana amin’ny ny fanomezam-pahasoavana izay ny malefaka manome azy sy ny zava-misy fa tsy maka ny fotoana mba mifidy izay tiany. izy koa dia tena ankasitrahana. Izy dia mahalala fa ny olona iray dia mila fahamarinan-toerana eo ambany tafo ihany amin’ny maha-vady sy ny vadiny ary na dia tsara tsara ny filazana ny zo, dia tsy maintsy misafidy toy ny fotoana sy ny tsy manao izany tsy tapaka. Raha ny marina, ny trano tsy ny fitsarana fa ny toerana ny firaisana tsikombakomba, ny antony sy ny fitiavana. Izany dia toy izany no ho mora kokoa mba hamahana kely tsy fitovian-kevitra ao ny misaina izany. Ny aza, mba handrava ny mahazatra ny fiainam-panambadiana izany dia zava-dehibe mba hanokana fotoana ny fotoana hafa hijanona eo amin’ny lohany-doha ny vady, mba hifanakalo hevitra na hiala hanova ny hevitra amin’ity fomba ity, ny vehivavy arabo dia afaka maneho ny olon-tiany ny olona, izay lavitra dia tsy ho afaka maneho izany. Ary ny lehilahy, noho ny anjara, mila mampiseho ny vadiny ny fitiavany amin’ny fomba samihafa, toy ny hoe ny arabo dia voatokana sy te-hitandrina ny hanaja ny ao anatin’ny fianakaviana, izany dia tsy voarara na émasculant mampiseho fihetseham-po. Salama, Ny lahatsoratra dia kely mitondra ny datin fa avy amin’ny kisendrasendra aho mitady loharanom-baovao eo amin’ny famitahana ny olona ny kolontsaina arabo Noho ny anjara aho miaraka amin’ireo sodaney noho ny efa-taona, tany am-piandohana aho dia nahita azy ho toy ny namana, tsy tia. Fa ny tena namana akaiky, be fitiavana, dia ny fitiavana. Izy efa nandray ny lalao ny fandeferana, ary avy eo dia nanomboka ny handray ny lavitra. Misy aho dia nahatsapa fa izany miraiki-po dia manova tsikelikely Satria, tsy mitsahatra. Satria efa manakaiky, dia mandeha izy, dia tsy mazava tsara ao amin’ny teny, izany dia korontana sy ny halako izany.
Efa ela aho nitady mba hahatakatra, ho avy ny mieritreritra fa izany no karazana tetika narcissistic nahatsapa namadika, satria ny zava-dehibe indrindra ho ahy dia izao ny fahatokiana, fitiavana, miteny aho hoe ny tenako fa amin’ny farany dia tsy maintsy ho zava-dehibe aminy, fa tsy mitovy. Aho manipulates mba hanatratra ny faran’ny. Avy eo dia nieritreritra aho hoe indray ny iray hafa teo aloha sodaney amin’ny fa tsy naharitra ny tena fotoana fohy dia toy izany. Ka manontany tena aho raha toa ka tsy Misy zavatra ara-kolontsaina. Iray fomba atao mba hahatonga ny vehivavy miankina, alternating eo amin’ny fotoana milaza ny fifanatonana sy ny lavitra, dia any amin’ny manambany Izay ny fahitana ny tandrefana. Satria tsy zakako, mampanaintaina loatra. Izy dia nilaza tamiko fa raha nijanona tony, nihevitra azy ho. Izany no mahatahotra noho aho dia tsy afaka manala ny loha inona no efa nipetraka tany nice.
Izany ny rivotra na inona
Na foana, eo amin’ny lohany aho dia babo. Namaky ireo rehetra ireo fanehoan-kevitra be ny saina. Noho izany, dia nanao fanamarihana roa, ny voalohany, ny mandainga sy tsy ho marin-toetra ao amin’ny Arabo dia ara-kolontsaina teboka fisotroana. Ianao no mangataka azy ho an’ny lahateny iray, dia mandefa anareo ho arivo toerana ny tena adiresy izy, dia tsy hilaza aminareo izay tsy fantany. Sivy ny vehivavy na mihoatra, ireo manan-kilema, na tsy hihaino tsara, na tsy hahita tsara. Izany, efa nahita tao amin’ny mazava ho azy ny teny fanafihana. Tampoka teo, ny kilema nijaly noho ny ankamaroan’ny vehivavy, dia mamporisika ny olona mba hiatrehana ny fahamarinana. Fa afaka miandry ny vadiny ny lehilahy iray izay manana ny folo, dia roa-polo na telo-polo taona tanora noho izy. Na inona na inona, na inona na inona, na inona na inona Ary izy mandehandeha manerana izao kilema hatramin’ny vao mangiran-dratsy ny andro
Arabo Chat USA →